श्रीमानले कु’टेरै ज्यान लिएर श्रीमति अनि यसरी गा’डे शव! अवस्य हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > अपराध > श्रीमानले कु’टेरै ज्यान लिएर श्रीमति अनि यसरी गा’डे शव! अवस्य हेर्नुहाेस्
श्रीमानले कु’टेरै ज्यान लिएर श्रीमति अनि यसरी गा’डे शव! अवस्य हेर्नुहाेस्
admin September 30, 2020 September 30, 2020 अपराध, समाज	0
काठमाडौ । म्याग्दीमा श्रीमानको कु टा ईवाट श्रीमतीको निधन भएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको बेलबोटमा एक महिलाको निधन भएको हो । बेलबोटकी ४३ वर्षीया माया सार्की श्रीमानको कु टा ईं वाट निधन भएको हो । श्रीमानले उनको शव खा ड ल मा गा डे को अवस्थामा फेला परेको थियो । प्रहरीले मायाका श्रीमान वीरवहादुर सार्कीलाई पक्राउ गरेको छ ।
मायाका श्रीमान ३९ वर्षीय वीरबहादुर सार्कीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मायाको शव घरवाट १५ मिटरको दुरीमा फेला परेको थियो । छोराछोरीले दिएको वयानका आधारमा मायाका श्रीमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । दुवै जनाले म दि रा से व न गरेर झ ग डा गरेको छोराछोरीले प्रहरी सामु बताएका छन् । मायाको शव परीक्षणका लागि बेनी अस्पतालमा ल्याइएको छ । समाचारकाे भिडियो हेर्नु तल क्लिक गर्नुहाेस्***
सारा ड्र ग्स केसमा तानिएकै बेला सेफअलीलाई करिनाले सहयोग नगर्न भनेपछि… फोनसमेत कब्जामा!
भारतबाट करोडौं चो’रेर भागेका नेपाली, फेसबुकमा पोस्ट गरेेपछि…
सुनको अन्डा दिने थाहा पाएपछि जवर्जस्ती छोरी तानातान, बुवा पक्षको वकिलले खोले अदालतमा भएको कुरा (भिडियो सहित)
१७ वर्षकी छोरीको पुकार … त्यसपछि बुवा ‘ना’ङ्गो हुनुभयो र मलाई करणी गर्नुभयो (भिडियोमै हेर्नुस्)
प्रमिलाकाण्डमा नयाँ ट्विष्टः सन्तोषले विमानस्थलबाटै विदाईकाे हात हल्लाउँदै यसरी सम्झिए प्रमिलालाई (भिडियो सहित)